Posted by ညီလင်းသစ် au 5.9.11
အိုးးးသော့တခုနဲ့ အတူချစ်ခြင်းတွေကိုခတ်ထားဖို့ သိပ်လှတဲ့စိတ်ကူးတခုပဲ။
မြင့်သန်းစာထဲမှာဖတ်ရတာတော့ ချစ်ခြင်းဆိုတာသူ့ ချည်းပဲခိုင်မြဲတယ်တဲ့ လူတွေကသာချစ်ခြင်းကို အရောင်ဆိုးပစ်ကြတာပေါ့.....
I swim at your "theingara"river.It's so smooth and I love her answer.
သဘောတူတယ်ဗျ၊ ချစ်ခြင်းဆိုတာ သူ့ချည်းပဲ ခိုင်မြဲတယ် ဆိုတာ...၊း) ပြတ်သွားတယ် ဆိုရင်တောင် ချစ်ခြင်းကိုယ်နှိုက်က ပြတ်တာ မဟုတ်ဘဲ လူနဲ့ အဲဒီချစ်ခြင်းကို ဆက်ထားတဲ့ ဆက်ထုံးက ပြတ်တာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်..၊း)
ကူးသာ ကူးပါ ဂျီးဒေါ်ရေ...၊ သိင်္ဂါရ မြစ်ဆိုတာ ကလီယို ပက်ထရာ ကူးခဲ့တဲ့ ပင်လယ်သေလို ပါပဲ၊ ကူးသူကို လန်းဆန်း နုပျိုစေတယ် မဟုတ်လား...။းD
အရေးအသားကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းလွန်းတယ်ဗျာ . . . ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့လေးကို အထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင် ညက်ညက်ညောညာ ပေသွားနိင်တယ် . . .
အင်း တို့အကိုက အရေးကလဲတော်
စာလေးလဲညက် အဖြေလဲညက်လို့ အထောင်းသက်သာမယ်ထင်ပါ့း)
သော့လေးပေးခဲ့တဲ့ နေရာက မန္တလေးဖြစ်နေတော့ မအိမ်သူ မဟုတ်တဲ့ တစ်ယောက်လို့ တောက်လျှောက်ထင်နေရာကနေ အဆုံးရောက်တော့ မအိမ်သူ ပဲဖြစ်နေတယ်နော်။ အရေးအသားက သိမ့်မွေ့လွန်းတော့ အဖြေချက်ချင်း မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းအရ နေရာဒေသနဲ့ အခေါ်အဝေါ်က မန္တလေးနဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်နေတော့ အကိုတို့စုံတွဲရဲ့ ဖူးစာဆုံဖြစ်ပုံကို ပိုသိချင်သွားမိတယ်။ ရေးထားပြီးသားဆိုရင် ဘယ်ပို့စ်လဲ ညွှန်ပေးပါဦး။
အဲ.. တခုကျန်သွားတယ်။ ကျွန်တော် စာဖတ်မသျှမ်းဘူး ဆိုရင် မအိမ်သူ ဆီက ဆင်တူ သော့ နောက်တစ်ချောင်းကော အကို?
ကိုညီလင်းသစ်တို့ ဘာစကားနဲ့ပြောတာလဲဟင်.. :D.. ဖတ်ရတာရော.. အကြောင်းအရာလေးရော ချောနေတယ်.... အဲလို ချောနေအောင် မိခင်ဘာသာစကားနဲ့မဟုတ်ရင် ပြောဖို့ မလွယ်ဘူးနော်... :P..
Wow!!! very romantic!!! ;)
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ရေးတတ်တယ်။
ကောင်းမှကောင်းပဲ။ ကွန်မန့်တွေက မေးထားတာတွေကိုလဲ သဘောကျပါ့။ ဆက်ရန်ရှိအုံးမလားမသိ...
စာအရေးအသားကောင်းလိုက်တာနော်။ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ သော့လေး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်မပျောက်နိုင်အောင် ဂရုစိုက်အုံးနော်း)
ဟိုးရင်ထဲထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရောက်တယ်အကို...:)
တစ်ကယ်ကြည်နူးစရာ အပြည့်လေးမို့..နှလုံးသားနဲ့ ခံစားပြိး ဖတ်သွားတယ်အကို....
သြော် ပြောမယ် ပြောမယ်နဲ့ မဖြစ်တာ ရှိသေးတယ် အကိုရဲ့ မမ မဟေသီရဲ့ နာမည်လေး လှတယ်လို့ ..:) ဘလော့တွေ ရေးရင် မအိမ်သူ မအိမ်သူ ဆိုပြိး အကိုထည့်ထည့်ေ၇းနေတာ မကြာခဏ တွေ့နေပေမယ့် စိတ်ထဲကပဲ ချီးကျူးမိပြိး အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မပြောဖူးသေးတာမို့ အခု မှပဲ ပြောမိတယ် :)
မအိမ်သူရဲ့ စိတ်ကူးလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါကြောင့်လဲ ကိုညီလင်း ရင်ထဲမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဗုံးတလုံးကို တသက်စာ ချည်နှောင်ခဲ့တာပေါ့နော်။
ခုချိန်မှာ သော့ခတ်ထားတာတွေကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင် ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေအပြင် ခိုင်မြဲတဲ့သံယောဇဉ်ရယ် အေးမြတဲ့ မေတ္တာတရားရယ် တဦးနဲ့တဦး နားလည်မှုနဲ့ ဖေးမစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေရယ် ပေါင်းစည်းပြီး အများကြီးတိုးပွါးလာပြီလို့ အဖြေပေးဖို့ မအိမ်သူကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် သင်ပေးအုံးမှပါ ... ။
မနက်စောစော ဒီပို့စ်လေးဖတ်လိုက်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းလို့ အပြေးအလွှား မန့်လိုက်တယ် ကိုညီလင်းရေ ... ။
လှလှပပဖွဲ့သွားတဲ့ သော့တံနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးးးး ကောင်းပါ့ ကိုညီလင်းသစ်ရေ:))
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးမိတယ် ကိုညီလင်းသစ်။
2nd time for "KEY".Your writing is so lovely and the conversation between you tie my heart by unseen silk thread.It gave me similar feeling like your grandparents' love story.That's why i urged you to write"chitkotwe"Longing for sequel and thanks:)
ခင်မင် နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူး ပါပဲဗျာ...၊
ဟုတ်ပါရဲ့ ညီမရေ..၊ အလျှောက်ကောင်းမှ အထောင်းသက်သာ ဆိုတာ တချိန်လုံး သတိရနေ ရမယ့် ပုံပါပဲ...၊း)
အဲ.. အဲဒီအကြောင်း ရေးထားတာ တဝက်တပျက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ၊း) နည်းနည်းချင်းစီ ဆက်ရေးနေတုန်း ပါပဲ၊ အတူ ဝယ်ခဲ့တဲ့ နောက်သော့ တစ်ချောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ သော့ချိတ်ထဲမှာ တွဲထားတယ် ...၊း)
ဖတ်ရတာ ချောမွေ့အောင် ကျနော်က မြန်မာမှု ပြုလိုက် တာပါ၊ ကျနော်တို့ ကြားမှာတော့ ပြင်သစ်လို ပြောပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတိုင်း မြန်မာပြန်ရင် ထောင့်နေမှာ စိုးလို့ဗျ...၊း)
ကျေးဇူးပဲဗျ၊ သော့က ပြန်တွေ့သွားပြီ ဆိုတော့ ဆက်ရန်တော့ မရှိတော့ပါဘူး၊ အဲ.. နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပျောက်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ...၊းD
ဟုတ်ကဲ့..၊ ဘဏ်မှာ သွားအပ်ထားရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ..၊း)
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမရေ..၊ အင်း ...ကျနော်လည်း ဒီနာမည်ကို အလွန်အကျွံများ သုံးမိနေပြီလား မသိ..၊း)
ကျနော်တော့ အသေခံ ဖောက်ခွဲရေး သမားကြီး လုံးလုံး ဖြစ်သွားတာ ထင်တယ်၊း) မမေ သင်ပေးချင်တာ လေးတွေက ကောင်းလိုက်တာ..၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ သော့ခတ်ထားလို့ အထွက် မရှိပေမယ့် စုဗူးလို အဝင်တော့ ရှိနိုင်တာပေါ့နော်၊ လက်ကျန် မရှိသလောက် နည်းပါးနေတဲ့ အချိန်လေးထဲက ဖဲ့ပြီး ကွန်မန့်လာပေး လို့လည်း ကျေးဇူးပါ မမေရေ...၊း)
အ'ချစ်' အကြောင်းကို 'ကြည်'နူး 'အေး'ချမ်းတာ မျိုးလေးပဲ ရေးချင်တာဗျ...၊
Wow.. ဒုတိယ အကြိမ် လာလည်တာလား၊း) ဂျီးဒေါ်က အတော် memory ကောင်းပုံရတယ်နော်၊ မမေ့သေးဘူး၊ မုဒ်ရရင် ရသလို ရေးဖြစ်ပါတယ် ဂျီးဒေါ်ရေ...၊း)
ဘေးတစ်နေရာမှာ ချစ်သူနှစ်ဦး သော့ဝယ်ကြတယ်ဆို
တော့ ဇာတ်ဆုံးရင် လွမ်းစရာလေးတွေလာတော့မယ်လို့
တွေပေါ်က မြန်မာလူငယ်လေးနဲ့ ဆွစ်အမျိုးသမီးလေးရဲ့
ဖြူစေမှုနဲ့ အကို့ကို တရားစွဲရလိမ့်မယ်ဗျိုးးးးး:))))))
အို့ အို.. ပျားရည်နဲ့တူတဲ့ အင်မတန်မှ ချိုမြိန်လှစွာသော သိင်္ဂါရမြစ်ထဲ စီးမျောရုံမက လက်ပစ်ပါကူးနေမိတယ်
မျက်နှာကို ပြုံးပြီးကိုဖတ်နေမိတာ သဘောကျလွန်းလို့..
ပြီးတော့ အားလည်းကျသွားတယ် ဟိဟိ
စာရေးကောင်းသလို ချစ်လည်းချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ပါလား ။
ဒါကြောင့်လည်း မအိမ်သူက သော့နဲ့ ခတ်ထားပေတာကိုးးးးးးးး
အရေးအသား ညက်ညောလွန်းတော့ ဖတ်သူရင်ထဲကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး စီးဝင်သွားတယ်။ အပြင်က သော့မရှိတော့ရင်တောင် ခတ်ထားခဲ့တဲ့ အရာတွေက လျော့သွားဖို့ မရှိနိင်တော့ပါဘူးလေ။
ပို့စ်တခုဖတ်ပြီးတိုင်း ညက်ညောလှပတဲ့ အရေးအသားတွေကို ပိုပိုသတိထားမိပြီး သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုညီလင်းသစ်က မန်းလေးကပဲလား။
ချီးမွှမ်းစရာစကားလုံးမရှိတော့လောက်အောင်ကို ရေးဖွဲ့တတ်ပါ့ဗျာ။ ရှရွှတ်ခန်မင်းသားဥပမာလေးကိုလည်း သဘောကျနေမိပါရဲ့။ မိသားစုနဲ့အတူ အေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေ...
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ကြည်နူးစရာ အချစ်ကဗျာ တပုဒ် ကိုဖတ်လိုက်ရသလိုဘဲ
ရေးထားတာ ညက်နေတာပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ ..
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ..
ဖတ်နေရင်း ရင်ထဲထိရောက်သွားတယ် .. >>
ဟင်း..ဟင်း..ဒီမှန်လေးရှေ့ မှာ ခဏခဏ ဇာတ်လမ်းတွေ ပေါ်တယ်နော်။
(တွေးမိတာကတကယ်တော့ ပျောက်သွားတာက သော့မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ဥာဏ်လို့ ..း) )
မျက်နှာသစ်တဲ့ဘေစင်ဆုိုတော့ မှန်လေးပါမြင်ယောင်ပြီး ဘယ်ခွဲ နဲ့ ညာခွဲ ညီလင်းသစ် ကိုသတိရသွားတာ။ မှန် နေရာနဲ့ ဘေစင်နေရာတူတူဘဲထင်လို့ ။း)
အချစ်လှလှလေး ရဲ့ အမှတ်တရ လှလှလေးတစ်ခုပေါ့ သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲ အဲ့တာကြောင့်ပြောတာ အချစ်တဲ့နတ်မင်းက လူသားတိုင်းကိုတော့ အချစ်ဆေးတွေတိုက်ကျွေးခဲ့တာပါပဲ သောက်တဲ့သူကသာ အဓိက သောက်တတ်တော့ဆေး မသောက်တတ်တော့ဘေးတဲ့ အစ်ကိုကတော့ အချစ်ဆေးမှာ ဘေးကင်းလို့း)
ဒီလို ဒီလို ဇတ်လမ်းတွေလည်းရှိခဲ့သည်ပေါ့ ။
Another good essay, btw isn't L500?
အတွေးကလည်းကောင်း အရေးကလည်းကောင်း... သိပ်လှတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်...။ မနေ့ကတည်းက၀င်ဖတ်တာ ကော်မန့်ပေးမရလို့ ခုမှပြန်လာပေးရတယ်....။
ကွန်မန့် ဖတ်ပြီးပြီးချင်း လန့်သွားတာနဲ့ ဘယ်ရှေ့နေတွေ အကောင်းဆုံးလဲလို့ ဂူးဂဲလ်မှာ လိုက်ရှာနေတယ်ဗျ၊း) အေးရာအေးကြောင်း လုပ်ပါဗျာ ..၊းD
ပြုံးပြီး ဖတ်သွားတယ် ဆိုလို့ ဝမ်းသာတယ်ဗျ၊ ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ stress တွေ လျော့သွားတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတာကိုး၊း) ဒီလောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး မချောရာ၊ ဝတ္ထုဆိုတော့လည်း ဒီလိုပဲ ရေးရတာပေါ့...၊း)
တသက်စာ ငွေစုစာအုပ်ထက် ပိုပြီး သေချာတယ် ဆိုတဲ့ သဘောများလားဗျာ...၊း)
co coe ...
စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါနော်၊ ကျနော်က မန္တလေးက မဟုတ်ပါဘူး၊ အလည်တော့ ခဏခဏ ရောက်တယ်ဗျ..၊
ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ဘုရား၊ ဘုန်းဘုန်းလည်း ကျန်းမာပါစေ...၊
ဖတ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်း ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ..၊း)
နောက် သော့တစ်ချောင်းက သူ့ဆီမှာပါ၊ အင်း..ညီမ တောင်းဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း ကိုရီးယားဇတ်လမ်း တွေလို ရေးရတော့မယ်နဲ့ တူတယ်...၊း)
အဲဒါ အမှန်ပဲဗျာ၊ ပျောက်သွားတာက သော့မဟုတ်ဘူး၊ မှတ်ဥာဏ်..ဟားဟား၊ သူ့သော့က သူ့ရဲ့သော့တွဲမှာ ပါပဲ၊ ဒီဘေစင်က ဟိုတခါရေးဖူးတဲ့ မှန်လေး ရှေ့မှာပါပဲ၊ ဒါလည်း မှန်တာပဲ၊ အော်တို ဆပ်စ်ဂျက်ရှင်း နည်းနဲ့များ လာကြည့်သွား သလားတောင် ထင်ရတယ်..၊း)
ညီ့ရဲ့ အပြောကို ထပ်တူပြု ကြည့်မယ်၊ သောက်တတ်ရင်ဆေး၊ မသောက်တတ်ရင် ဘေးဆိုတော့ အချစ် = အရက်...၊ အချစ်တွေ ပျို့အန်တာ၊ အချစ်နာကျတာ တွေလည်း ရှိသေးတော့ ဒီလိုပြောတာ မှန်နိုင်တယ်ဗျ..ဟားဟား၊ အဲ, အချစ်ကြောင့် အရက်သောက်ကြပေမယ့် အရက်ကြောင့်တော့ အချစ် မသောက်ကြဘူး ထင်တယ်၊း)
မဟုတ်ပါဘူး၊ သော့က ဟောင်းနေတော့ အဲဒီလို ထင်ရတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ...၊း)
တကူးတက ပြန်လာပြီး ပေးတဲ့ ကွန်မန့်လေးအတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...။
ချစ်သူ သူဌေးသားနောက် ပါသွားတဲ့ ကုလားကြီး အကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်.ဟီးး
စာလေးတစ်ပုဒ်ထဲကနေ ရလိုက်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပေါင်းက မြောက်များစွာ
I read this post twice,the whole is very lovely.I love your love story and your grandpa & grandma's love story (CMD) too....:D
ပိုစ့်တင်ပြီးပြီးချင်း ဖတ်မိပေမယ့် ဖုန်းနဲ့မို့ ကော်မန့်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး...
အစွမ်းကုန် သိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီး အလွန်လှပသပ်ရပ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်ပါပဲ..
ဒီ့ထက်ပိုပြီး မပြောတတ်တော့ပါဘူး...း))
ဒီစာစုလေးက သိတ်ဖတ် လို့ကောင်းတာပဲ.. အရေးအသားကလဲ ညက်ညောပြီး ရင်ထဲမှာ ကြည်ကြည်နူးနူး ရှိလိုက်တာ.. ၂ယောက်စလုံး သိတ်ကံကောင်းတာပဲနော်.. အဲဒီ သိင်္ဂါရမြစ်လေးက လူတိုင်းအတွက်အမြဲ စီးဆင်းရင် ကောင်းမယ်နော်...
ကြည်နူးစရာ အတိတ်တွေက လန်းဆန်းနေဆဲပေါ့လေ... ပျော်စရာကြီးနော်...
wow! So Beautiful Post.
သော့လေးက အမှတ်တမဲ့နဲ့ဆို အသစ်အတိုင်းပဲ။
ဒါပေမယ့် နှစ်လကြာရှည်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အရာလေးတွေကလည်းချက်ချင်းမြင်လွယ်ပါတယ်။
အရေးအသားကောင်းတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်စာကိုဖတ်ပြီး ပီတီတွေဖြစ် အားတွေကျနေရင်း စာလည်းဆုံးရော သော့ အိုင်ဒီယာရှိတဲ့မအိမ်သူကို အရမ်း ချီးကျူးမိတယ်။
သော့ပေါ်က ၁၅၀၀ ကတော့ ဒီဇတ်လမ်းမှာ သော့ချက်ပဲ နော့.........
ကျမတို့ ဒီနေ့ ပဲ သော့တွဲထဲက သော့တချောင်း ဘယ်ကသော့လဲလို့ စဉ်းစားနေကြတာ။ အခုထိမသိသေး ပါဘူး။
သြော်... ဒါကြောင့် အသဲအသန် ပြန်ရှာနေတာကိုး...
မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုပဲ အယူသီးတယ်နော်။ သော့ပျောက်တုန်းက အစ်ကို့ ကို ပြဿနာ မရှာတာ ကံကောင်းတယ်မှတ် အစ်ကိုရေ...
ဒါနဲ့ အစ်ကိုရေ... ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်က နာမည် ဆင်နေတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနာမည်ကို ရွေးတော့ google မှာ ရှာပြီး ရွေးတာပဲ အစ်ကို... အစ်ကို့ နာမည်ကို သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ အစ်ကို တမျိုးထင်နေမှာ စိုးလို့ ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်က ဘလော့ဂါ အသစ်ပါ။ အစ်ကို့ လင့်ကိုလဲ ယူသွားပါတယ်။
ကြည်နှုးစရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး ကြည်နူးအားကျသွားပါတယ်...
သော့လေးတစ်ချောင်းနဲ့ ခတ်ထားယုံသာမက၊ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေနဲ့ ခိုင်မြဲအောင် ချည်နှောင်သိမ်းထုတ်ထားတဲ့ ချစ်တတ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
အကို့ရဲ့အရေးအသားက နီကိုရဲ ရေးတဲ့ ဝတ္ထုတပုဒ်ရဲ့ အစဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုကို သတိရစေတယ် ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ရသကို မပေးနိုင်ဆုံး ဘလော့တစ်ခုကို ညွှန်းရင် အကို့ဘလော့ကိုပဲပြရမှာပဲ
ဟိုးးအရင်ရက်တွေက တည်းက ပရင့်ထုတ်ပြီး ယူသွားတာ..။
ရုံးမှာ အလျင်အမြန်မဖတ်ချင်တာလည်း ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေကို အေးချမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေကို အကို ရေးတဲ့စာတွေက ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
သော့ကလေးတစ်ချောင်းက အစပြုလို့လေးနက်ခိုင်ကျည်တဲ့..ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို လှလှပပလေး တွေ့လိုက်ရတယ်...။
ဒီရောက်တော့ ကွန်မန့်တွေ အကုန်ဖတ်ကြည့်တယ်.။
ဖေ့ဘုတ်ဘာသာအရဆိုရင် like လုပ်ချင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်..။
ကိုညိမ်းနိုင် ရဲ့ အဆိုကိုတော့ ညီမလည်း ထောက်ခံတယ်...အဟဲ....။
နည်းနည်းလေးတော့ ရေး အကိုရာ.....
ညီမလည်း ရှေးရှေးတုန်းက အကို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဟောင်းထင်နေတာ....
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးတာ တင်ပြီးပြီးချင်းနေ့ကတည်းကပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရုံးကဖတ်ရတာမို့ ကော်မန့် မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါကိုလည်း မှတ်မိနေတယ်။ ဘယ်နှခေါက်ပြန်ဖတ်ဖတ် အရမ်းကြိုက်တယ်။ တကယ်လို့များ တစ်ယောက်ယောက်က မဂ္ဂဇင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ္ထုတောင်းတဲ့အခါကျရင် ဒီဝတ္ထုလေး ပေးလိုက်နော်။ အဲဒါ သတိရလို့... ညီမလေး လာပြောတာ။း)